Deg deg:Wasiir Amniga Mr. Isloow” Har iyo Habeen waxaan diyaar u nahay inaan Difaacno shacabka – idalenews.com
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow ayaa balan ku qaaday iney ka shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa weerarada Cadowga Soomaaliyeed ee Al-Shabaab u soo maleegayaan Shacabka Soomaaliyeed kuna doonayaan iney ku qal qal geliyaan amaanka Caasimaddu Horumartay ee Muqdisho.
Wasiir Isloow ayaa sheegay in Ciidamada Xasilinta Caasimadda har iyo Habeen u soo jeedaan sidii loo difaaci lahaa madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho,wuxuuna ciidamada ka dalbaday iney inta ay howgalka ku jiraan u turaan shacabka.
“Mudane Ra’iisal wasaare Waxaan diyaar u nahay inaan har iyo habeen idin difaacno,Ciidamada waxaan kula dardaarmayaa ugu danbeyntii iney iyagana shacabka u turaan”,Ayuu yiri Wasiir Isloow oo shalay la hadlay Ciidamada Xasilinta Caasimadda.
Ciidamada Xasilinta Caasimadda Muqdisho oo dhiira gelin loo sameeyay ayaa hadda bilaabaya howlgal lagu xasilinayo Muqdisho,islamarkaana lagulana dagaalamayo Hubka sharcidarada ah iyo kooxaha lidka ku ahaa Amaanka.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo shalay dhiira gelin ugu tagay Ciidamada Xasilinta Caasimadda ayaa dhamaan Ciidamada iyo Taliyeyaashoodaba ka codsaday iney ka shaqeeyaan sidii magaalada Muqdisho Amnigeeda u noqon lahaa boqolkiiba boqol(100%).
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre,Wasiirka Amiga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow,Taliyeyaasha Ciidamada Booliska iyo Nabad sugida iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa shalay dhiira gelin ugu tagay Ciidamada Xasilinta Caasimadda kuna booriyay iney dardar geliyaan sugida Amniga Muqdisho.
Cabsi xooggan ayaa hadda soo wajahday Argagaxisada Al-Shabaab oo caadeystay iney dhiiga shacabka micnadaro ku daadiyaan,waxaana Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed dhaxanta iyo dhulka howdka ah ugu dhabar adeegayaan sidii shacabkooda uga dul qaadi lahaayeen Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo feker iyo Militari ahaanba markaan jabay.